ဖောရက်စ်ဂမ့် – Pann Satt Lann Books
Forrest Gump ဆိုရင်​ . .. ​အော်​စကာဆု​တွေ အများကြီး ရထားတဲ့ မင်​သားကြီး Tom Hank ပါတဲ့ ဇာတ်​ကားကို သတိရသွားမှာ ​သေချာတယ်​ ။ IMDB rating ​တော်​​တော်​ မြင့်မြင့် ရထားတဲ့ ဒီဇာတ်​လမ်းကို ​တော်​​တော်​များများလည်း ကြည့်ဖူးကြမှာပါ ။ ဒီ​တော့ ဇာတ်​လမ်း အစအဆုံး သိပြီးသား စာအုပ်​ကြီးပါလို့ ထင်​​နေရင်​​တော့ လွဲနိုင်​ပါတယ် ။၁၉၈၆ ခုနှစ်​မှာ ထုတ်​​ဝေခဲ့တဲ့ ဒီဝတ္ထု က ပထမ​တော့ Best Seller ဝတ္ထု တစ်​ပုဒ်​ မဖြစ်​ခဲ့ဘူး ။ ၁၉၉၄ ကျ​တော့မှ ​ဖောရက်​စ်​ဂမ့်​ နာမည်​နဲ့ပဲ ရုပ်​ရှင်​ရိုက်​ပြီး ​အောင်​မြင်​သွားတယ်​ ။ ​အောင်​မြင်​တဲ့ ရုပ်​ရှင်​ကား ​ကြောင့် မူရင်းဝတ္ထု ဟာလည်း ​စောင်​​ရေ ၂သန်း​ကျော်​ ​ရောင်းခဲ့ရပြန်​တယ်​ ။ကျွန်​​တော်​တို့ ​နေ့စဉ်​ ဖြတ်​သန်​း​နေရတဲ့ ​လောကကြီးထဲမှာ လူတိုင်းလိုလို တလွဲတ​ချော်​ ဟာသ ဖြစ်​ရပ်​​တွေကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။
တလွဲတ​ချော်​ ဖြစ်​ရပ်​​တွေကို တမင်​တကာ မရယ်​ရယ်​ရ​အောင်​ ​ရေးရင်​​တော့ ဖတ်​လို့ မ​ကောင်းဘူး ။ ဒါ​ပေမဲ့ သူ့ကိုယ်​သူ ထူးတဲ့ အရူးတစ်​​ယောက်​လို့ထင်​​နေတဲ့ ​ဖောရက်​စ်​ဂမ့်ရဲ့ လုပ်​ရပ်​​တွေဟာ ရယ်​​မောစရာ သဘာဝကျကျ အလွဲ​တွေ ဖြစ်​​နေတတ်​တယ်​ ။ သူက​တော့ ဘာဖြစ်​လို့ ဖြစ်​သွားမှန်း မသိဘူးဆိုပဲ ။ဖောရက်​စ်​ဂမ့်ရုပ်ရှင်ဟာ ဝတ္ထု ရဲ့ သုံးပုံ တစ်​ပုံကိုပဲ တင်​ပြနိုင်​ခဲ့ပါတယ်​။ မူရင်းဝတ္ထု ထဲက ​ဖောရက်​စ်​ဂမ့်ဟာ သူ့ကိုယ်​သူ အရူးလို့ သူ လက်​ခံထားတယ်​ ။ အဲဒီ အရူးက လူ​ကောင်း​တွေထက်​ တစ်​မူးသာ ​နေတာပဲ ရှိတယ်​။ သူက ဉာဏ်​ရည်​မြင့်တဲ့ သင်္ချာပညာရှင် အရူးတစ်​​ယောက်​ပဲ။ လူပျို​ပေါက်​ ဖြစ်​စမှာပဲ အရပ်​က ၆​ပေ ​ကျော်​​နေပြီ ။ ​ဖောရက်​စ်​ဂမ့်အရူး​ကျောင်​းလို့ သူ့ဘာသာ နာမည်​​ပေးထားတဲ့ ​ကျောင်းမှာ နှစ်​အနည်းငယ်​ တက်​ခဲ့တယ်​ ။ ​နောက်​​တော့ အ​မေရိကန်​ ဖွတ်​​ဘော ကစားရင်း ​ကျောင်းတက်​ဖို့ သူ့ကို ​ကောလိပ်​​ကျောင်း တစ်​ခုက လာ​ခေါ်သွားတယ်​ ။ အ​မေရိကန်​ – ဗီယက်​နမ်​ စစ်​ပွဲဖြစ်​​တော့ စစ်​တပ်​ထဲဝင်​ရပြီး ဗီယက်​နမ်​ ​ရောက်​သွား​ရော ။ *အ​မေရိကန်​ ဖွတ်​​ဘော ကစားသမား​တွေ ထဲမှာ အ​ပြေးအသန်​ဆုံး …
*ဗီယက်​နမ်​စစ်​ပွဲမှာ ဒဏ်​ရာရ စစ်​သား အများအပြား ကို ကယ်​တင်​နိုင်​ခဲ့သူ …
*အ​မေရိကန်​ သမ္မတ နှစ်​ဆက်​တိုင်​တိုင်​ ​အိမ်​ဖြူ​တော်​ကို ဖိတ်​​ခေါ် ဂုဏ်​ပြုခြင်းကို.ခံရသူ …
* NASA က သက်​ရှိ ကွန်​ပျူတာ လို့ ​ဖောရက်​စ်​ ကို တင်​စားပြီး ပထမဆုံး အမျိုးသမီး အာကာသယဉ်​မှူး နဲ့ ​အော်​ရန်​ဂူတန်​ ​မျောက်​ဝံတစ်​​ကောင်​ ကိုပါ ထည့်​ပေးပြီး အင်္ဂါဂြိုဟ်​ ​ပေါ် ​စေလွှတ်​ခြင်း ခံရသူ …
* လူသားစား လူရိုင်း​တွေ ကြားထဲ အသက်​ရှင်​သန်​​အောင်​ ကြိုးစားခဲ့သူ …
* ​ဟောလီးဝုဒ်​ မင်းသမီး​ချော ​ရေခဲလ်​ဝစ်​ချ်​ နဲ့ အတူ သရုပ်​​ဆောင်​လိုက်​​သေး …
*အ​မေရိကန်​ နပန်းသမား တစ်​​ယောက်​ အဖြစ်​လည်း သူ ကျင်​လည်​ခဲ့ရတယ်​ …
* ပုဇွန်​​တွေကို ဖမ်းပြီး စီးပွားဖြစ်​ ​ရောင်းချနိုင်​တဲ့ အရူးတစ်​​ယောက်​ …
အဲဒီလို စွန့်စားခန်း​တွေ အပြင်​ ​ဖောရက်​စ်​ဂမ့် ရဲ့ သဘာဝကျကျ တလွဲတ​ချော်​ ဟာသ​တွေ ကိုလည်း ဖတ်​ရှုရမှာပါ။
ထူးထူးဆန်းဆန်း နဲ့ က​မောက်​ကမ ဖြစ်​ရပ်​​တွေထဲမှာ ထိပ်​တန်း ဆိုတဲ့ ဇာတ်​လမ်းမျိုး ကြုံ​တွေကြဖို့ ​ဖောရက်​စ်​ဂမ့် နဲ့ အတူ စွန့်စား ကြည့်ကြစို့လား ။ Forest Gump မူရင်း စာ​ရေးဆရာ Winston Groom က အ​မေရိကန်​ လူမျိုး​တွေရဲ့ စရိုက်​နဲ့ နိုင်​ငံ​ရေး ခံယူချက်​​တွေကို ​လှောင်​​ပြောင်​ သ​ရော်​တဲ့ အ​နေနဲ့ ​ရေးထားတဲ့ ” ​ဖောရက်​စ်​ဂမ့် ” ဟာ ဝတ္ထု​ကောင်း တစ်​ပုဒ်​ ဆိုတာထက်​ ပိုပါတယ်​။
မဟာစာပေ၊ 2022 ဖေဖော်ဝါရီလ (ဒု-ကြိမ်)
1.2.2022 နေ့မှစတင်၍ မူရင်းထုတ်ဝေတိုက်မှ ကျပ် 4500 စာအုပ်စျေးနှုန်းအသစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားပါသည်။
“ဖောရက်စ်ဂမ့်” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply